Top 10 mpitam-boky feo miafina tsara indrindra ho an'ny vady mpanara-maso - Vahaolana OMG
Ny 10 Mpampiasa feo miafina tsara indrindra XNUMX ho an'ny fanaraha-maso ny mpivady vady
Sarotra ankehitriny ny mitady mpiara-miasa tsy mivadika izay manolo-tena tanteraka aminao. Na izany aza, tsy hitantsika avy amin'ny maso mibontsina fa tsy mivadika aminao ilay namanao na tsia. Raha te-hahafantatra ianao dia afaka mampiasa fitaovana manaraka an-peo feo hitsikilo ny vadinao ary hahitana hoe inona ny marina.
SPYV018 - MITOMANANA SIM CARD VOICE FISOHANANA FIVAROTANA:
Fantatsika daholo ny fiteny sy ny fomba fitenin'ny vadinao dia mampiseho taratra be momba ny toerana hivoahany. Mba hahazoana antoka izany dia tsy maintsy ataonao antoka fa manana maso ianao isaky ny ataon'ilay mpiara-miasa ary mijery ny fomba firesahan'ny mpiara-miasa na dia tsy ao aza ianao. Ho an'ity tanjona ity, SPYV018 no fitaovana tsara indrindra hivoaka tsy misy fisalasalana azo antoka. Ankehitriny, inona no ataon'ity zavatra kely ity? Afaka mirakitra feo sy manangona horonantsary ho anao izy ireo ary mitahiry azy ireo ao anaty karatra SD izay azo ampandrenesina hatrany mandra-32gb! Tsy izany ihany fa tonga lafin-drano ihany koa izy, na dia misimisy aza ny vadinao indray mandeha ary ario izy. Tsy mila miahiahy be ianao satria hanao toy izany koa rehefa alainao izany. Azonao atao mihitsy aza ny mametraka izany amin'ny toerana rehetra ao an-trano mba hijery maso ilay olona manokana nefa ianao dia sahirana miasa amin'ny zavatra mahazatra toy ny antoka fa tsy mihinana zavatra manimba izy ireo na manao zavatra mety hiteraka azy ireo. !
Miaraka amin'ny vanim-potoana maoderina mifoha ary mandroso kokoa, dia lasa sarotra ny miambina ny zanakao na ny olon-tianao ary omena antoka fa tsy voataonan'ny zavatra iray na olona manimba ny fitondran-tenany na mangalatra azy ireo tsy ho ao aminao. . Tsy maintsy ataonao antoka fa mijanona ao anatin'ny tsipika fijerinao foana izy ireo mandritra ny fotoana tokony hijanonany ho tony hatrany fa izy ireo dia eo am-pelatanana. Ahoana kosa raha avelanao hanana fahalalahana feno izy ireo nefa mbola azo antoka fa eo am-pelatanana izy ireo? SPYV022 dia zavatra ho anao avy eo, ity dia fitaovana iray amin'ny herin'ny banky mirakitra feo mpitsikilo. Miverina miaraka amin'ny bateria izay afaka mitohy tsy tapaka hatramin'ny ora 600 mahitsy tsy mijanona na dia segondra iray aza. Tsy izany ihany fa miantoka anao amin'ny kalitao feno ihany koa satria ity fitaovana ity dia afaka mirakitra ny hafainganam-pandeha 192kbps na haingana ny fanatontosana ny fanoratana ho tonga amin'ny fahatsiarovana an-dahatsoratra Ilya 32gb. Marina izany, tsy mila mandeha mialoha ianao ary hitady karatra SD rehefa mividy io vokatra io ihany!
Ankehitriny, ahoana raha olona tsy te-hiditra amina zavatra be loatra ianao toy ny voalaza ao ao anaty lahatsoratra ihany no hitadiavana ireo olon-tianao? Raha io no mitranga mihoatra ny SPYV027 dia zavatra ho anao ihany. Azonao atao ny mametraka an'ity fitaovana kely ity amin'ny toerana rehetra ao an-trano, ho efitra izany, na toerana ho an'ny besinimaro ary manangory any amin'izay tianao tianao eo amin'ilay toerana nefa mbola azo antoka fa manana ny zoro rehetra amin'ny vadinao ianao ary mahalala tsara ny fihetsik'izy ireo olon-kafa sa iza no iarahany aminao! Ity gadget ity dia afaka mirakitra hatramin'ny ora 600 ka tsy mitady na inona na inona ary manao na mampiditra an'io horonantsary io ao anatin'ny segondra vitsy. Manjary miaraka amin'ny fahatsiarovana 8Gb namboarina koa ho azo antoka fa ny habetsahan'ny fitehirizana ihany no azonao angatahina ny mividiana ity vokatra ity. Noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny fampidiranao ilay lehilahy na tovovavy intsony ianao satria na tsy hitan'ny masonao aza ny zavatra mety hitranga, ity fitaovana ity dia hahazo antoka fa hainao tsara ny handre azy ireo ary hahafantaranao ny ao anatiny. raha mbola miery miafina noho ny habeny bitika!
Raha toa ianao ka mahatsapa fa lasa diso tanana ny olon-tianao, na misalasala ianao fa toa tsy mampahatezitra azy ireo ny fomba fanaonao mahazatra na raha toa izy ireo ka mifandray amin'ny olona, ​​dia tsy tokony hatao izany. Aza misalasala intsony fa io gadget io dia manarona azy io araka izay fahaizany. Ny SPYV015 dia mpitendry feo Keychain mini izay azonao omena fotsiny amin'ny mpiara-miasa na olona tadiavinao ary manana fihainoana feno amin'ny zavatra rehetra holazaina na ny fidirany isaky ny miaraka amin'izy ireo. Samy mitondra fiara ny olon-drehetra amin'izao andro izao, ka tsy tokony ho olana amin'izy ireo ny hanana izany avy aminao, miaraka amin'ny fampiasanao ity gadget ity dia afaka manana fahatsarana tonga lafatra hoe iza no iarahana amin'izy io. mifandray ary inona ny fitondran-tena itazonany ny olon-kafa isaky ny tsy tratrarinao. Ity fitaovana ity dia feno hipoka amin'ny bateria mihoatra ny ora 28 manome toky anao fa tsy manahy momba na inona na inona na dia efa navelanao hijanona mandritra ny ora maromaro ny Keychain na raha lasa any ivelan'ny fiara ny olon-tianao efa nijanona kely ny Keychain kely amin'ny fotoana. Azo zahana ao amin'ny ora haingana amin'ny ora 1 ihany koa izy io, ka tsy mila miahiahy ianao amin'ny mitady sokitra mandritra izany mandritra ny fotoana rehetra!
Amin'ireo rakitsoratra rehetra nasehontsika tetsy ambony, ity iray ity dia tsy maintsy miavaka indrindra noho ny habeny mahatalanjona ary koa ny habetsaky ny fotoana fametahana bateria omena azy tsy misy fijanonana amin'ny firaketanao. Marina izany, ny SPYV003 dia tonga amin'ny fotoana fandraisam-peo hatramin'ny 280 ora mandroso tsy misy fiatoana, toy izany koa hahafahanao mahazo antoka fa na iza na iza manana io fitaovana io ho an'ny tanjona fiarovana na hahita ny fomba ifandraisany amin'ny olon-kafa, inona hetsika ataon'izy ireo hiditra an-tsehatra sy ny sisa. Tsy mila miahiahy izy ireo amin'ny fiampangana azy io amin'ny fotoana rehetra! Tsy izany ihany fa na dia apetaka amin'ny fiampangana aza io fitaovana io dia azonao atao ny mampiasa azy io mba handraisana an-tsoratra ireo horonantsary ary manome toky ianao fa manana maso na zoro ianao amin'ny zava-mitranga rehetra eny an-toerana. Izy io ihany koa azo averina USB, ka tsy mila miahiahy ianao amin'ny mahavery azy amin'ny fotoana na zavatra hafa, mifanaraka amin'ny PC sy Mac koa izany ka na inona na inona mpampiasa anao dia afaka manao hetsika fotsiny amin'ity fitaovana ity fotsiny miaraka amin'ny iray -touch.!
Araka ny fantatsika rehetra, isaky ny manome toky ianao fa hijery izay rehetra mitranga amin'ny toerana iray dia toerana ho an'ny daholobe izany, na efitrano tiana indrindra. Te-hahazo antoka ianao fa ny fitaovana ampiasainao dia mijanona tsy mahita ny mason-jaza ara-dalàna na mahazo zavatra mifangaro amin'ny zavatra hafa manodidina ny fotoana hanaovana an'io tanjona io, afaka mandeha miaraka amin'ny SPYV013 ianao, inona ny zavatra manokana ity gadget mahafinaritra ity dia miakanjo toy ny iray amin'ny zavatra manandanja indrindra ao izay misy .. penina, iza no hieritreritra fa ny penina tsotra dia azo ampiasaina amin'ny firaketana feo ary izany koa ny kalitao avo lenta afaka mirakitra hatramin'ny ora 20 mahitsy tsy miato a?! Miaraka amin'ny fahatsiarovana 8 Gb namboarina ihany koa, ka tsy mila manahy momba ny fitahirizana ao anatin'ireo ora be mpialam-bidy 20 ihany koa ianao. Io fitaovana io dia tonga lafatra raha mitady olona na zanakao efa miditra amin'ny orinasa ianao na mpianatra. Amin'izay dia azonao atao fotsiny ny manome azy ity penina na apetrakao ao anaty boaty io mba hiantohana, fa manana rakitsoratra feno ianao na inona na inona alehany, na inona hiresahany na aiza na aiza misy azy!
Tsy isalasalana fa ny fitaovana USB dia iray amin'ireo fomba tena mivaingana hamindra ny zavatra avy amin'ny solosaina mankany amin'ny iray hafa, maivana be izy ireo ary azonao atao ny mitondra azy ireo na aiza na aiza misy anao na inona na inona manahy momba ny habakabaka satria afaka mamono azy ireo ao anaty pataloha jeans ianao. paosy! Fa ahoana kosa raha ny USB Same USB no mitondra anao na aiza na aiza dia afaka manome toky ny fiarovana ny tahiry fitahirizanao ary ny fiarovana anao koa? Marina izany, eto i SPYV009 no miditra ny fidirana! Noho ny endrik'ilay kapila USB penina dia tsy mila miahiahy ianao fa tsy voaro amin'ny firaketana feo na firy na firy na firy. Satria betsaka ny olona miditra amin'ny solosaina amin'izao andro izao, dia azon'izy ireo antoka fa manana iray koa ianao ary raha ny olon-tianao na ny vadinao izay heverinao fa mamitaka koa. Bingo, ka raha misalasala ianao amin'ny mpiara-miasa aminao na ao anaty zavatra izy dia mazàna dia tsy tokony na manana maso mazoto fa rehefa any ivelany izy ireo dia manana toetra hafa amin'ny olona noho izany dia mety ho zavatra fotsiny ihany izay ilainao mba hanananao toky sy hikaroka azy ireo fa tsy manakaiky azy ireo mihitsy aza. Afaka mirakitra ny zava-drehetra amin'ny fakan-tsary aza izy ireo rehefa manome toky fa tsy maninona na inona mitranga amin'ny toerana, mifehy azy rehetra miaraka amin'ny feo fandraketana azy io!
Tsy isalasalana fa ny tovovavy no tena sarotra fifehezana rehefa tonga amin'izao tontolo izao ankehitriny satria maro be ny olona manodidina ny ankehitriny dia mikaroka hatrany mitady tovovavy azon'izy ireo aleha na hifalifaly. Mba hahazoana antoka fa tsy mianjera amin'ny zavatra mitovy aminy ny mpiara-miasa aminao na efa mpinamana amin'ny olona tsy tokony miaraka aminy. Ity no iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra azonao atao, eny, SPYV012. Ity mpikirakira feo pendant ity dia helo iray mahafatifaty amin'ny hatsarany ary koa fitaovana fandrakofana feo be dia be toa ny lazain'ny anarana. Omenao fotsiny izay rehetra tianao hojerena, ary hanaiky izany amin'ny fo misokatra izy ireo noho ny hatsaran-tarehiny. Ity zavatra ity dia afaka mirakitra hatramin'ny ora 5 tsy misy fiampangana, ka tsy mila miahiahy ianao ianao raha sanatria misy resaka fitenenana etsy sy eroa. Mahazo fitehirizana 8 GB voaorina izy io ary miantoka ny tahiry data ampy ho azy hiasa tsy misy fijanonana. Ity dia fanomezana mahafinaritra iray izay samy atao, miaro ny zanakao ary azonao antoka fa eo an-tanana havanana izy ireo na aiza na aiza misy azy.
Tian'izay rehetra manana ireo fantsom-bolo kely ireo izay azon'izy ireo atao mandritra ny fotoana rehetra, mino aho fa na inona na inona anjara ataonao dia mety ho toerana misy anao. Ny fanomezana ireo zavatra kely mahafatifaty azy ireo dia hampifaly azy ireo ary hamorona ny androny. Ahoana kosa raha nilaza taminay izahay tamin'ny fanamboarana ny androny fa afaka manamboatra ny anao koa ianao? Eny, satria ny SPYV020 dia miaraka am-peo anatiny izay afaka mitady ny olon-tianao ary milaza aminao ny tsipiriany rehetra momba azy ireo na ny zavatra ataon'izy ireo na dia tsy manodidina azy ireo aza ianao. Tsy vitan'ny hoe misakana anao tsy ho reny ray aman-dreny amin'ny alàlan'ny fahatongavanao foana eo an-tampon'ny mpiara-miasa aminao mandritra ny fiandohan'izy io na ny sisa mba hisakanana azy ireo tsy hanahirana, fa manome antoka ihany koa ny firaketana an-tsoratra ny kalitao! Voarakitra miaraka amin'ny endrika format-peo an'ny WAV izy io ary miaraka amin'ny fahatsiarovana 8gb izay mitazona zavatra tena ilaina ary manome ny tahiry azonao angatahina fotsiny!
Ity dia fitaovana iray mahavariana tokoa raha te hirakitra an-tsoratra ny zava-drehetra amin'ny toerana iray ianao ary ho azo antoka fa na dia toa tsy olona mikorontana aza ianao mijanona eo amin'ny aloka handre izay lazain'ny olona tianao na miresaka. Ny SPYV027 dia manome kalitao tsy misy dikany ary koa ny fandehan'ny bateria mba hanomezana toky anao fotsiny fa ny sisinao ilainao hikarakarana ny vadinao, na ny olon-kafa izay heverinao fa mety hanimba na hanimba fihavanana amin'izao fotoana izao. Raha misy olona maniry ny hisoroka ireo gadra tsy misy dikany ireo dia io ihany no tokony ilainao hiantoka ny fiadanan'ny vadinao na olon-kafa ary tsy mijanona ho voatazona tanteraka. Izy io koa dia manome antoka fa mijanona tsy ho hitan'ny olon-kafa ianao noho ny endrika famolavolana mahavariana ihany koa.
13191 Total Views 2 Views Today